🥇 ▷ Ku soo degso Kaameeraha Google ee Mi 6 [APK] ✅
Ku soo degso Kaameeraha Google ee Mi 6 [APK]
Aaladaha ‘Xiaomi’ hadda waxay caan ku yihiin qaybohooda qiimaha la awoodi karo oo ay weheliso waxqabadka guud, oo ay ku jiraan kamaradaha. Xiaomi Mi. 6 waa naqshadda calanka jiilalkii hore ee la bilaabay 2017. Kani waa nooca guushiisa ka horeeyey Xiaomi Mi 5. Halkan maqaalkan, waxaan kugula wadaagi doonnaa xiriirika si aad u soo dejiso Google Camera for Mi 6. Codsigan kamaradan ah Daboolka Google wuxuu ku yimaadaa sidii faylka APK.
Haddii aad tahay isticmaale isticmaale ah Android ama kamarad la yaab leh, markaa waa inaad wax ka ogaataa Google Camera. Kameerada Google waxaa si rasmi ah looga heli karaa aaladaha Google Pixel. Si kastaba ha noqotee, horumariyayaashu waxay soo gudbiyeen codsiyada GCam ee u dhashay aalado badan Mi Mi waa mid ka mid ah. Waxaad si fudud u soo dejisan kartaa oo aad ugu dhejin kartaa faylka “APK” qalabkaaga qalabka Android.
Inta badan aaladaha waaweyn ee Android waxay ku qalabeysan yihiin barnaamijyo kamarado awood badan leh iyo is dhexgalka softiweer ama tayaynta. Sidaa darteed, waxaad ka heli kartaa natiijooyin wanaagsan tayada kamaradda adoo adeegsanaya kamaradaha caadiga ah. Laakiin marka ay timaado waxqabadka Kameradda Google, waxay ka taagan tahay qof walba. Kombuyuutarka koodhadhka xoogga leh ee GCam wuxuu bixiyaa muuqaal cajiib ah iyo tayo muuqaal ah xitaa marka lagu jiro xaalado mugdi ah. Saamiga iftiinka, isku-dheelitirka cad, autofocus, qaabka sawir-qaadista, habka HDR iyo panorama ayaa sifiican u shaqeynaya. Astaamaha ugu waxtarka badan waa Night Night Sight, Lens Blur, AR Stickers, Lens Google, Motion Slow, iwm.
Daboolka Google Camera ee Mi 6:
Haddii aad maqashay kamarad Google ama aad u isticmaashay ka hor, markaa waa inaad ogaataa inay tahay mid ka mid ah barnaamijyada kamaradaha ugu wanaagsan ee ku shaqeeya Android. Xitaa codsi heer sare ah oo heer sare ah oo lagu hagaajin karo kaamirada ayaa ku fashilmay waxqabadka dalabka kamaradaha Google. Isbarbardhiga midabka, iftiinka, hababka habeenkii, soosaarka geeska qaab qaab toosan ayaa u shaqeeya sida jiidashada. Ka dib markaad isticmaasho GCam, mar dambe ma dooneysid inaad isticmaasho barnaamijka kamaradaha caadiga ah.
Google Camera waa codsi kamarado oo caadi ah oo ay diyaariyeen Google aaladaha Pixel kaliya. Qaabka Google Pixel illaa Pixel 2 taxanaha loo yaqaan ‘Pixel 3 taxanaha’ taxanaha Pixel 3a: dhamaan aaladaha waxay leeyihiin kamarad gadaal ah. Sababtaas awgeed, waxaad u qaadan kartaa horumarinta softiweerka awooda badan ee kamaradaha Google. Marka, haddii aad leedahay aaladda Xiaomi Mi 6 oo aad rabto sawir wanaagsan oo aan dhibaato lahayn, fiiri maqaalkan.
Dekadda Google Camera waxaa soosaaray fu24 iyadoo lagu saleynayo nooca ARNOVA mod. Waad booqan kartaa XDA X halkan ka. Uma baahnid marin xidid arintan. Ka eeg xiriirada soo degsashada ee Google Camera APK ka hoose.
Marka hore, waa inaad ka soo degsataa faylka GCam.APK ee kujira aaladda Mi 6 Waxaad kahesho xiriirki hore.
Kadibna koobi faylka degsan ee faylka ah ee loo soo degsado si loogu kaydiyo gudaha ama dibadda taleefankaaga.
Hadda, haddii aad rakibayso faylka loo yaqaan “APK file” markii ugu horreysay, dhaqaaji Meel aan la garanayn xulashooyinka qalabka Xeerarka > Amniga > Dejinta dheeri ah > Gaar ah.
Kadib, fur faylka iyo Touchez faylka GCam APK si aad u rakibatid.
Mar haddii habka rakibida la dhammeeyo, ku fur codsiga GCam qalabkaaga.
Hadda waxaad diyaar u tahay inaad u isticmaasho xayawaanka.
Haddii ay taasi dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad beddesho qaabka kamaradda, si fudud u furi Dheeri ah doorashada> Xeerarka menu oo u beddel sida aad jeceshahay.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani waxtar kuu yeelan doono adiguna waxaad si fudud ugu rakibtay barnaamijka GCam qalabka Xiaomi Mi 6 Waxaad. Su’aal kasta ha ka fakirin inaad waydiiso faallooyinka hoose.